श्रीपेच त कुच्चिएछ सरकार « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७३, आईतवार ०७:४४
राणाहरुको दृष्टान्त पेश गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले ‘राजा’ को रुपमा नारायणहिटीबाट बहिगर्मनपूर्व आफ्नो बंशले पहिरिएको श्रीपेच साथमा लैजाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, तत्कालिन सरकारले उनको इच्छा पूरा गरेनमात्र हैन, अहिले ज्ञानेन्द्रलाई लैजान नदिइएको त्यही श्रीपेचको कथा सुन्यो भने इतिहास र सम्पदलाई माया गर्नेहरु धुरु–धुरु रुने छन् ।
०६९ भदौमा रुपन्देही र सुर्खेत कक्षका झ्यालको पुराना सिसा विस्थापित गरी बुलेटप्र्रुफ सिसा जडान गरेर श्रीपेच राखिएको थियो । तर, अहिले त्यो त्यहीँको सैलुनमा छ । ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्नासाथ सेनाको एउटा टुकडीले पहरा दिएर श्रीपेच सुरक्षित राखेको थियो । सैनिक पहरा त अहिले पनि छ, तर सेनाका तीन जवानमात्र खटिएका छन् । उक्त श्रीपेचमा सात सय ५० वटा हीराका टुक्रा छन् । टायरामा दुई हजार सात सय टुक्रा छन् ।
श्रीपेचको पछिल्तिर झुण्डिने कल्की बर्ड अफ प्याराडाइज नामको चराको पुच्छर हो, जो संसारमै दुर्लभ मानिन्छ । कल्कीबाहेकका भागमा हीरा–मोति, माणिक, नवरत्न, सुन जडित छन् । राजदण्ड र चमरमा पनि सुनजडित छन् । त्यसमा चाँदीको मात्रा बढी रहेको बताइन्छ । श्रीपेचलाई एक विशेष किसिमको तेल लगाएर नियमित रुपमा सफा गरेन भने चमक घट्दै जान्छ । सरकारले सुरक्षा त दिएको छ, तर सरसफाई भएको छैन । त्यसमाथि अहिले नारायणहिटी संग्रहालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका रोहित ढुंगानाले बताएअनुसार, गत वर्षको भूकम्पका कारण क्ष्तिग्रस्त भएको श्रीपेच पुनःनिर्माणको बजेट अहिलेसम्म सरकारले निकासा दिएको छैन ।
कति र कस्तो क्षति भएको हो ? यसबारे ढुंगानाले केही बताएनन् । अचम्मको कुरा त के भने, हजार डिग्री तापक्रमले पनि नबिगार्ने डिजिटल पासवर्ड प्रणालीको अत्याधुनिक दराजमा राखिएको उक्त श्रीपेचमाथि भूकम्पले क्षति पु¥यायो कसरी ? वा, ०६९ सालमै त्यति जतन गरेर राखिएको श्रीपेच पछि किन त्यस्तो कच्ची भवनमा सारियो ? यसको जवाफ दिने अधिकारी भेटिएनन् । नारायणहिटीस्रोत भन्छ, भूकम्पले सैलुनको छाना थिचिँदा श्रीपेच कुच्चिएको छ । त्यसमा रहेका केही मोति दाना चुँडिएका छन् । थाहा छैन, त्यसमा जडित सुन पहिलाकै नम्बरी छ कि, त्यसमा कुनै बदमासी भइसक्यो ? नारायणहिटी प्रमुख ढुंगानाका अनुसार, सरकारले यथेष्ट बजेट निकासा दिएमा सकेसम्म ०७४ साल नलाग्दै श्रीपेच सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि खुला गर्न सकिनेछ ।
अर्को दुःखलाग्दो कुरा छ, कम्तिमा पनि राजा त्रिभुवनको पालादेखि जम्मा पारेर राखिएका बन्यजन्तुका शिकारको अवशेष सरकारले अनुमति दिएमा आजभोलि नै नष्ट गरिँदैछ । पञ्चायत व्यवस्था रहँदासम्म देशका कुनै पनि जंगलमा बन्यजन्तुको शिकार भए वा मरेमा तिनका अवशेष सोझै नारायणहिटी दाखिला हुन्थे । अहिले पनि त्यहाँको फारिसखानामा बाघ, चितुवा, हात्ती, गैँडाका छाला, सिंग, नङ्ग्राजस्ता पुरातात्विक महŒवका शिकार छन् । तर, स्याहार नपुग्दा बाहिरैबाट डुङ्डुङ गन्हाउने भइसकेका छन् । यसैकारण, त्यसको सार्वजनिक प्रदर्शन हैन, नष्ट गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख ढुंगानाले बताए । सरकारी सम्पत्ति भएका कारण त्यसलाई नष्ट गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने छ । सरकार कति लापरवाह भएछ भने, दरबारले वर्षौंदेखि विभिन्न रसायनको प्रयोग गरी सुरक्षित राखेका ती छाला, सिंग र नङ्ग्राहरु देशमा गणतन्त्र आएर, ती सामानको जिम्मा सरकारले लिएपछि १० वर्ष पनि टिकेनन् ।
क्याबिनेटकोे तर्साउने मात्रै हो काम ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विज्ञप्ति निकालेपछिको क्याबिनेट बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी छानबिन हुनुप¥यो भन्ने कुरा उठाए । १४ वर्षअघिको उक्त घटनामा पनि संयोगवश गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेल थिए र क्याबिनेट बैठक त्यतिबेला पनि बसेकै हो । के त्यसबेला पनि यसरी कुरा उठेको थियो त ? विगत सम्झँदै पौडेल भन्छन्, ‘धेरै खाले आशंका थिए तर दीपेन्द्रले नै बाउ मारेकोमा सबै विश्वस्त देखिन्थे ।’